Rs. 320.00 355.00
यो किताबमा आम नेपाली बालबालिका र किश�
यो किताबमा आम नेपाली बालबालिका र किशोर किशोरीहरुले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरुलाई रोचक किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । किशोरकिशोरीको शारीरिक परिवर्तनका बारेमा अभिभावक र विद्यालयले राम्ररी बुझाउन नसक्दा उनीहरुले झेल्न सक्ने समस्याहरु यो उपन्यासमा देखाइएको छ । गलत खालको संस्कृतिले उनीहरुको वर्तमान र भविष्यलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पारिरहेको हुन्छ भन्ने पनि उपन्यासले गम्भिरतापूर्वक प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट जोगिने उपायहरु पनि सिकाएको छ । मित्रताको अर्थ र महत्वलाई यो उपन्यासमा रोचक तरिकाले देखाइएको छ । केटाकेटी र किशोरकिशोरीमाथि गरिने शारीरिक र मानसिक शोषणका बारेमा पनि उपन्यासले आवाज उठाएको छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा बालबालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्विकार गरिँदैन । यो उपन्यासले उनीहरुका भावना, विचार र संवेदनालाई अभिभावक र समाजले बुझिदिनुपर्ने विचारलाई प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै केटाकेटीको व्यक्तित्व निर्माणमा केटाकेटी स्वयम्ले पनि के कस्ता बानीहरुको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने पनि उपन्यासमा आएको छ । हामीकहाँ परम्परागत रुपमा चल्दै आएका कतिपय गलत संस्कृतिका बारेमा मात्र नभई आजकाल लोकप्रिय विद्युतीय सन्चार, सामाजिक सन्जाल एवम् मनोरन्जनका कतिपय साधनहरुले बालबालिकालाई गलत संस्कृति सिकाइरहेको तर्फ पनि उपन्यासले सचेत गराउने काम गरेको छ । बढ्दो यौन शोषण र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट कसरी किशोरहरु प्रताडित छन् ? त्यसका लागि उनीहरु केके कुरामा कसरीकसरी सचेत हुनुपर्छ ? र प्रेम के हो ? भन्ने विषय उपन्यासमा छन् । त्यस्तै उपन्यासले उठान गरेका केही अरु महत्वपूर्ण विषय छन् । आफ्नो काम आफैं गरौं, प्रश्न गरौं, आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारप्रति सचेत रहौं भन्ने विषयहरु उपन्यासमा छन् । जातीय विभेदले निम्त्याउने परिणाम र चलचित्र एवम् पुस्तक छनौटले पार्ने दुरगामी असरमाथि पनि पुस्तकले गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य पार्छ । आत्मसाक्षात्कार र स्वयम् सचेत हुने बन्नका लागि उपन्यासले तयार पार्न सघाउँछ । कथा, निबन्ध र कविता विधामा पहिचान बनाएका विजय सापकोटाले किशोर उपन्यास उडान लेखेका हुन् । किशोरहरुका लागि पुस्तकको अभाव भइरहेको बेला उडान प्रकाशन भएको छ । बाल र किशोर साहित्य लेखनमा पनि औधी रुचि राख्ने सापकोटाको ‘उडान’ उपन्यास अधिकांश नेपाली किशोरहरुका समस्या, भावना र मनोविज्ञानमा आधारित छ । उनीहरुका कतिपय सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक समस्याहरुसित जोडेर यस उपन्यास लेखिएको लेखकले बताएका छन् । दश बाह्र वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका किशोरहरुलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको भनिएतापनि यो उपन्यास बालबालिका, अभिभावक, शिक्षकलगायत सबै उमेरका पाठकका लागि उपयोगी छ । यो किताब केही स्कुलहरुमा कक्षागत पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अध्यापन कार्य गराइरहेका कारण पनि यस किताबको महत्व झल्किन्छ । तपाईंको सहयोगले आगामी किताबका लागि काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ ।